#update #နောက်ဆုံးရသတင်း #သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား #ရဲများအား မိုင်တိုင် #‎ရတနာပုံတက္ကသိုလ်‬ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ | democracy for burma
#update #နောက်ဆုံးရသတင်း #သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား #ရဲများအား မိုင်တိုင် #‎ရတနာပုံတက္ကသိုလ်‬ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ
tags: #‎ရတနာပုံတက္ကသိုလ်‬, (Kyaw Gyi AB), ABFSU, Agga Thi Ha, နာရေးကူညီမှုအသင်း-ရန်ကုန်, ဗကသသပိတ်တပ်ကြီး, မင်းကိုနိုင်, ရဲများအား မိုင်တိုင် ၄၃၂ တွင်ချထားပြီး...., ရွာအဖြတ်မှာ လမ်းဆင်းလျောက်ပါတယ်, သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား, ကျောက်ပန်းတောင်း, နောက်ဆုံးရသတင်း,့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များပိုမို များပြာလာနေပါတယ်, ၅၀၀၀ကျော်သွားပြီ, Burma, FFSS.YGN, min ko naing, Myanmar, NNER, Pyae Sone Aung
“ အဆစ်အပို မယူလိုပါ
“ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ” သို့
Messages box မှဖြစ်စေ
ကျောင်းသားတွေ ဘာကြောင့် သပိတ်မှောက်နေသလဲ လာလာမေးကြသူများအတွက်
ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ ဒီ ၁၁ ချက်ကို ရောက်တဲ့နေရာတိုင်း ဟောပြောပါတယ်
အဲ့ဒီ အချက် (၁၁)ချက်ကို မသိသေးသူများရှိ
အခု ဈေးမြောက်လမ်းက ဈေးအနောက်လမ်းချိုး
အဖြူ အစိမ်း ၇၀ ခန့် လိုက်ပါချီနေ တဲ့
၄း၄၀့
၂၉.၁.၂၀၁၅ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပုပ္ပါးမှ ကျောက်ပန်းတောင်းသို့ ချီတက်လာသည့် အမျိုးသား ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်းအား နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ လိုက်ပါကူညီဖေးမ စောင့်ရှောက်မှု ပုံရိပ်မှတ်တမ်း။
မြို့လုံးကျွတ်နီးပါ ထွက်ပြီး ကြိုဆို
credit Ahngai Kong Ahngai
သပိတ်မှောက် စစ်ကြောင်း အတွင်းသိ့ု့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များပိုမို များပြာလာနေပါတယ်
ရခိုင်စစ်ကြောင်း စတင်လှုပ်ရှားပါပြီ။ ကျောင်းသားအင်အား ၄၀၀၀ကျော်ဖြင့် အဖွဲ့ပေါင်းစုံစွာ ရဟန်းပျိုတွေပါဝင်ကြပါတယ်။ မြို့တွင်းမှာသာ လှုပ်ရှားနေပါသေးတယ်။
၁ ရက်နေ့ သတင်းကိုစောင့်ပြီး လိုအပ်လာရင် ရန်ကုန်ကို တက်ပါမယ် ။
နံနက် (10:20) မှာ ပုပ္ပါးမှ စတင်ထွက်ခွာလာပါပြီ။
ပုပ္ပါးမှကျောက်ပန်းတောင်းသို့ ၁၀ မိုင်ဝေးပါတယ်။
မန်းလေး စစ်ကြောင်း ဆက်လက်ချီတက်လျှက်ရှိနေတုန်းပါပဲ။
ဖုန်းသတင်းဖြင့် >> cr. ချော စန
ဗကသ ကျောင်းသားသပိတ်ပင်မစစ်ကြောင်းကြီး ကို သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုနေကြတဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်က မိဘပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
တောင်သာ ဝဲလောင် ၉မိုင်
ဝဲလောင် ပုပ္ပါး ၁၈ မိုင်
ရဲ ၁၀၀ ဂိတ်လွန်တဲ့ နောက် ၂မိုင်လောက်မှာ
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ နယ် အစကို ရောက်ပါတယ်
လမ်းခရီးလုံခြုံရေးအရ ကျောင်းသားတွေဟာ ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ကားပေါ်ကို တက်ပါတယ်
ဦးကျော်သူ ကားတွေ အပါအဝင် ၃၀ ကျော်ခန့် ပါ
အချိန်ကတော့ ၇း၁၀ ပါ
လမ်းတလျောက် လူထုကြိုဆိုမှုက ပြင်းထန်ပါတယ် နောက် ၄၅ မိနစ်လောက်မှာ
ပုပ္ပါလွင်ကျေးရွာမှ ကျောင်းသူ/သားများကို ကြိုဆိုပါ၏ ဗီနိုင်းက အစိမ်းရောင်ပေါ်မှာ အဖြူစာလုံး နဲ့ပေါ့
နားချင် နားနေဖို့ တော့ မိုးကာတွေ ဖျာတွေ ခင်းထားတယ်
သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား စစ်ကိုနိုင်ကို ဖမ်းဆီးထားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းမမှန်ကန်ပါ။
ခဏတာ ပြောဆိုဖို့ ခေါ်ယူတဲ့ သဘောလေက်သာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခု မှောင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုံခြုံရေးအရ ကားများဖြင့် ပုပ္ပါးသို့
Agga Thi Ha
အချိန် – ၇း၃၅
မိုင်တိုင်အမှတ် ၄၂၃ တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့  ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်းအား ၁၀၀ ခန့် မှ ကျောင်းသားများ ဖြတ်သန်းမည့် လမ်းကြောင်းအား ပိတ်ဆို့ တားဆီးရန် စီစဉ်နေသည်။
သတင်းထောက်များ မေးမြန်းချက်အား တာဝန် အရ ဟု သာဖြေသည်။
( အချိန်။ ။၄ နာရီ ၄၇) cr.Pyae Sone Aung
← #MOI #အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ #ရင်းနှီးပွင့်လင်း စွာ ဆွေးနွေးပြီး ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်
#จับตา!! #พรุ่งนี้ #10.00 น. #อัยการสูงสุดนัด “#สรยุทธ” →